crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Hoggaamiyaha loo baahan yahay! | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka February 8, 2017	0 731 Views
Muqdisho (Himilonews) – Aqoonyahankii Yuhuudi Maraykanka ahaa ee Albert Einstein ayaa yiri; “Gebi-dhacleyntu waa ku celcelinta sameynta hal shey mar iyo marar adiga oo filanaya inaad toos u tiigsato natiijada ugu fiican.
Markaas ayaa si lamid ah, casrigii Nabi Yuusuf ee roob la’aanta iyo rafaadka looga bixi karaa hoggaamin hufan oo ku sugan aqoon iyo amaano.
Previous: Hooyo inanteeda ku dartay nin 40-jir ah si uu daryeel u siiyo geerideeda kadib
Next: Hadduu jiri lahaa Lik Wan Yew Soomaali ah